British iyo Faransiis lagu dilay Gaalkacyo - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
British iyo Faransiis lagu dilay Gaalkacyo
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 7 Abriil, 2014, 17:44 GMT 20:44 SGA
Gaalkacyo waxaa maanta lagu dilay laba shaqaale oo ka tirsan Qaramada Midoobay. Waxa ay u kala dhasheen Britain iyo Faransiiska. Haddaba waxaan ka warreysanay Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Gaas sida ay wax u dhaceen.
Magaalada Gaalkacyo waxaa lagu dilay laba shaqaale oo ka tirsan Qaramada Midoobay. Waxa ay u kala dhasheen dalalka Britain iyo Faransiiska. Haddaba waxaan ka warreysanay Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Gaas.
Weriyaha BBC Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa weydiiyay sida ay wax u dhaceen.
Israa'il oo si xoogan u duqeysay Qaza
Barnaamijka Ciidda Soonfur53:39
Sida looga ciiday Hargaysa04:03
Diyaar garowga Ciida03:15
Muqdisho: Howlgal lagu baarayo hub02:34
Macalin Saciid Saalax oo ka hadlaya taariikhda Saado Cali07:55
Nin caawiya dadka waallan xilliga soonka03:21
Doodda Gudniinka Fircooniga52:46
Soomaalida Maraykanka oo tacsi u dhigay Saado Cali04:24
Barnaamijka Click 25 07 201402:07
Maryam Ibraahim oo u duushay Taliyaaniga00:14
Video Booqashada Madaxwayne Faransiiska ee G/Africa00:15
Video gaaban oo ku saabsan Libya00:15
Garoonka Tripoli oo la weeraray00:15
Dalxiiska hawada sare00:37
Ololaha Nigeria ee soo daynta gabdhaha maqan01:18
Malala oo kulan la qaadatay Goodluck Jonathan00:15
Barnaamijka Teknolojiyadda ee Click01:53
Amnesty International oo warbixin ka soo saartay CAR00:15
Sawirro: Carruur doon u raaca Iskuulkooda(none)
Sawirro maalinta 18-ka May(none)
Sawirro: Musiibada ku habsatay macdan qodayaasha Turkiga(none)